Ungawabuyisa kanjani amafayela ku-USB flash drive lapho i-USB flash drive ingavulwa-Airy data recovery
Ungawabuyisa kanjani amafayela ku-USB flash drive lapho i-USB flash drive ingavulwa
71 2021-05-02 11:25
Kunezizathu eziningi zokuthi kungani i-U disk ingavulwa. Singazama izixazululo ezingaba khona ngamunye ngamunye. Kepha uma imbangela yenkinga ingatholakala, kulula ukuxazulula inkinga. Umhleli olandelayo uzokunikeza izindlela ezimbalwa zokuxazulula inkinga i-U disk engakwazi ukuvulwa, futhi ngethemba ukuthi izokusiza kuwe.
Lapho sifaka i-USB flash drive kwikhompyutha yethu, kepha sithola ukuthi i-USB flash drive ayikwazi ukuvulwa, ngicela ungatatazeli ngalesi sikhathi, yini okufanele ngiyenze uma i-USB flash drive ingavulwa?
Kukufundisa ukuxazulula inkinga lapho ikhompyutha ingakwazi ukuvula i-USB flash drive.
Qhafaza kwesokudla i-USB flash drive bese uqhafaza Properties.Kufasitela lezinto ezivelelayo, chofoza Amathuluzi -Qalisa Ukuhlola.Isizathu esiqonde kakhulu sokuthi idrayivu ye-USB ingavulwa ukuthi uhlelo lwefayela lonakele. Indlela ejwayelekile yalokhu ukulungisa idiski. Qhafaza kwesokudla ku- "Diskable Disk" bese ukhetha "Properties" kumenyu yokuqukethwe okuzivelelayo.
Bese ushintshela kuthebhu ethi "Amathuluzi" ewindini elivuliwe, chofoza inkinobho "Iphutha Lokuhlola Ukuqala Ukuhlola", hlola izinto zombili ewindini elivelayo, bese ekugcineni uchofoze inkinobho "Qala" ukuhlola nokulungisa amaphutha wediski.
Ngemuva kokuthi ukulungiswa sekuqediwe, ungazama ukuvula i-U disk!
Lapho le ndlela engenhla yehluleka ukuvula i-U disk, kunconywa ukufometha i-U disk. Qhafaza kwesokudla ku- "Removable Disk" bese ukhetha "Ifomethi" kumenyu yokuchofoza kwesokudla. Ewindini le- "Ifomethi" evula, ungahloli "Ifomethi esheshayo" bese uchofoza inkinobho "Qala".
Ngemuva kokwenza kaningi imisebenzi engenhla, uma i-USB flash drive isakwazi ukuvulwa ngokujwayelekile, zama ukufaka i-USB flash drive nge-USB port. Ngasikhathi sinye, qiniseka ukuthi izinketho zesethingi ezihlobene nokugcinwa kwamakhompiyutha azikhutshaziwe. Izindlela ezithile zokubuka nokusetha: Vula ibhokisi lengxoxo le- "Run" bese ufaka umyalo "gpedit.msc" ukufaka i-Group Policy Manager.
Ewindini leMphathi Wenqubomgomo Yeqembu, chofoza "Imodyuli Yokuphatha" → "Isistimu" → "Ukufinyelela Kokugcina Okukhiphekayo", bese uqinisekisa ukuthi i- "Removable Disk: Deny Read Permission" kanye ne- "All Diskable Disk: Deny Read Permission" ngakwesokudla "Zombili lezi zinto zisethelwe kokuthi" Akumisiwe "noma" Kukhutshaziwe ". Uma kungenjalo, chofoza kabili into ehambisanayo, hlola into ethi "Abakhubazekile" ewindini le-pop-up bese uqhafaza ku- "KULUNGILE".
Uma i-disk ye-U isengavulwa ngemuva kwezindlela ezingenhla, ungasebenzisa kuphela ithuluzi lokukhiqiza ngobuningi le-U ukwenza umsebenzi wokulungisa. Le futhi iyindlela ephumelela kunazo zonke yokuxazulula ukwehluleka kwe-U disk.
Lapho sifaka i-USB flash drive kwikhompyutha yethu, kepha sithola ukuthi i-USB flash drive ayikwazi ukuvulwa, ngicela ungatatazeli ngalesi sikhathi, yini okufanele ngiyenze uma i-USB flash drive ingavulwa? u Qala ikufundisa ukuthi ungaxazulula kanjani inkinga ukuthi ikhompyutha ayikwazi ukuvula i-disk u.
1. Qhafaza kwesokudla kwi-USB flash drive bese uqhafaza Izakhiwo, chofoza "Amathuluzi" - "Qala Ukuhlola" ewindini lezinto ezivelelayo, phawula zonke izinketho kuwindi le-pop-up Check Disk, bese uqhafaza ku-Start, njengoba kukhonjisiwe ku isibalo:
2. Zama ukuvula i-USB flash drive ukuze ubone ukuthi ayivuleki yini, bese ucindezela ukhiye wesinqamuleli se-win + r ukuvula iwindi lokuqalisa bese ufaka i-gpedit.msc, njengoba kukhonjisiwe esithombeni:
3. Ku- "Local Group Editor", chofoza ku- "Management Module-System-Removable Storage Access", bese uthola i- "Removable Disk: Deny Read Permission" ne- "All Removable Disks:" ohlwini olungakwesokudla. Yenqaba konke izimvume "izinto ezimbili, njengoba kukhonjisiwe esithombeni: Ikhaya le-U Disk
Vula izinto ezimbili ezingenhla ngokulandelana, shintsha ukumiswa kwazo ziye ku- "unconfigured" noma "disabled", bese uchofoza ku- "OK", njengoba kukhonjisiwe kumfanekiso:
Akukhathalekile ukuthi ikhompyutha ayikwazi ukuvula i-USB flash drive.Kunezixazululo eziningi.Lezi zindlela ezimbili ezingenhla ziyizindlela zethu ezivamile.Ngifanele ngenzeni uma i-USB flash drive ingakwazi ukuvulwa futhi ngaphandle kosizo lokulungisa kwangaphandle isoftware? Vele uzame lezi zindlela ezivamile.
Okwesithathu: Idiski ye-U ayikwazi ukuvulwa, okwenza isizathu sokufomatha
Idiski ye-U, i-hard disk yeselula, ikhadi le-SD namanye amadivayisi wokugcina awakwazi ukuvulwa ngokuchofoza kabili. Yini okufanele ngiyenze uma ifomethi yenziwa? Yini okufanele ngiyenze uma ngingaqapheli ukuyifometha ngoba kunemininingwane ebalulekile egcinwe kwi-USB flash drive futhi idatha ayinaso isipele? Ungethuki lapho uhlangabezana nalesi simo. Lapha ngizokufundisa ukuthi ungaxazulula kanjani inkinga yokufomatha lapho i-USB flash drive ingavulwa.
Idiski ye-U ayikwazi ukuvulwa, ikhuthaza ukufometha
Idiski ye-U iyidivayisi yokugcina ethandwa kakhulu yedatha. Inokubukeka okuncane, indawo enkulu yokugcina, futhi kulula ukuphatha, okwenza kube ithuluzi lokugcina elidumile. Noma ngabe usehhovisi lansuku zonke noma empilweni yansuku zonke, ungabona isibalo se-U disk. Njengoba i-USB flash drive isetshenziswa kakhulu, abasebenzisi bayovamise ukuhlangabezana nezinkinga ezahlukahlukene ezihlobene ne-USB flash drive.Okuvame kakhulu ukuthi i-USB flash drive ayikwazi ukuvulwa futhi yenze ifomethi.
Ngemuva kokufaka i-USB flash drive ethekwini le-USB lekhompyutha, vula imenenja yefayela bese ubona i-drive drive ye-USB flash drive. Lapho umsebenzisi echofoza kabili idrayivu ye-USB ukuzama ukuvula i-USB flash drive, i-USB flash drive ayikwazi ukuvulwa, futhi uhlelo luvula iwindi elibonisa "Idiski ku-drive K: idinga ukufomethwa ngaphambi kokuyisebenzisa. Ingabe ufuna ukuyifometha" noma "Idiski yedrayivu H ayifomethwanga. Ingabe ufuna ukuyifometha manje? "
Ngalesi sikhathi, uma uchofoza inkinobho ethi "Fometha iDiski", uhlelo luzovela ngewindi lokufomatha. Ngemuva kokukhetha isistimu yamafayela, chofoza okuthi KULUNGILE ukufometha i-U disk. Noma kunjalo, ukufometha kuzodala ukulahleka kwedatha kwi-USB flash drive. Uma idatha ku-USB flash drive ibalulekile, ungayifomathi.
Ukufometha i-USB flash drive kukhombisa ukuthi inkinga yokufomatha ingabangelwa izizathu ezahlukahlukene. Abasebenzisi abahlukahlukene bahlangabezana nezimo ezahlukahlukene, ngakho-ke izizathu ngeke zifane. Umhleli lapha ubala ezinye zezizathu ezijwayelekile zokubhekiswa.
Idiski ye-USB yephukile, futhi inephutha ngokomzimba. Isibonelo, idrayivu ye-USB ilahliwe futhi i-USB flash drive ayikwazi ukusetshenziswa ngokujwayelekile; noma ikhwalithi ye-USB flash drive engamanga ayifanelekile, futhi ne-chip chip ye-USB flash drive noma isilawuli esikhulu sonakele. Kunenkinga nge-USB port yekhompyutha. Amanye amakhompyutha anamachweba we-USB amabi noma amandla kagesi awanele, angadala ukuthi amadivayisi angaphandle anjenge-U disks angasetshenziswa ngokujwayelekile. Kulokhu, ungazama ukuxhuma i-USB flash drive kwamanye amakhompyutha. Kunenkinga ngomshayeli. Uma umshayeli wekhompyutha elimele noma emdala kakhulu, kungahle futhi kudale le nkinga. Kunconywa ukuthi ubuyekeze umshayeli. Ukuhlukaniswa ku-USB flash drive kulimele. Ukwehluleka ukuchofoza u- "Khipha Ngokuphepha Izingxenyekazi Zekhompyutha bese ukhipha Imidiya" ngaphambi kokukhipha i-U disk kukhompyutha, okudala umonakalo wokwahlukanisa. Igciwane noma ukulimala kwe-malware. Ama-virus noma isoftware enobungozi ibhubhisa idatha ebucayi kwi-USB flash drive, okwenza idatha ingakwazi ukutholakala ngokujwayelekile.
Idiski ye-U ayikwazi ukuvulwa, okwenza isixazululo sokufomatha
Uma imininingwane ekwidrayivu ye-USB ibalulekile futhi nemininingwane ingafakwanga isipele, inqubo yenkululeko efanele kufanele ibe yile: ukubuyisela idatha kusuka ku-USB flash drive, bese ulungisa inkinga ye-USB flash drive.
Qaphela: Ungenzi imisebenzi ye-chkdsk ku-U disk ngaphambi kokuthola idatha kusuka ku-U disk, ngoba ezimweni eziningi i-chkdsk izolungiswa ngokweqile kuphela, okuzothinta kakhulu umphumela wokutakula idatha.
Ngingayithola kanjani idatha kusuka ku-USB flash drive lapho i-USB flash drive ingavulwa futhi ifomethwe ukufometha? Inkinga ebonakala iyinkimbinkimbi empeleni ilula kakhulu. Uma nje kusetshenziswa isoftware yokutakula ethembekile, abasebenzisi abajwayelekile bangaxazulula kalula inkinga yokuthola idatha kusuka ku-U disk. Ake sibheke inqubo yokubuyisa idatha kusuka ku-U disk:
Isinyathelo 1: Faka i-USB flash drive embobeni ye-USB yekhompyutha ukuze ikhompyutha ikwazi ukubona i-USB flash drive, bese isebenzisa isoftware yokutakula idatha iDiskGenius kukhompyutha.
IDiskGenius iyinhlangano enamandla yokuphatha ukwahlukanisa kanye nesoftware yokuthola idatha enemisebenzi yedatha enamandla futhi ingaphatha izinkinga zokulahleka kwedatha kusuka kumadivayisi wokugcina ahlukahlukene.
Isinyathelo 2: Khetha i-USB flash drive ohlangothini lwesobunxele lwesoftware yeDiskGenius (lapha udinga ukukhetha imodeli ye-USB flash drive, i-RD1 + serial number part), bese uchofoza inkinobho ethi "Buyisa Ifayela".
Qaphela: Uma i-USB flash drive ingavuleki, ikwazisa ukufometha, okukhombisa ukuthi ukwahlukanisa kwi-USB flash drive kulimele. Ukulimala kwesigaba akuwona umonakalo wokwahlukanisa, ngakho-ke asikho isidingo sokucinga izingxenye ezilahlekile lapha.
Isinyathelo 3: Khetha imodi yokutakula bese uchofoza inkinobho ethi "Qala".
Uma ufuna ukwenza ukuskena okujulile okuphelele kwe-USB flash drive, udinga ukubheka izinketho ze- "Complete Recovery" ne "Extra Scan for Known Types File" ngasikhathi sinye; ngaphezu kwalokho, uma wazi uhlobo lohlelo lwefayela idrayivu ye-USB ngaphambi kokucela ukufometha, ungachofoza inkinobho ethi "Okuthuthukile" Ukukhetha uhlobo lohlelo lwefayela le-U disk ngaphambi kokuba inkinga ivele, engathuthukisa ukusebenza kahle kokutakula.
Isinyathelo 4: Hlola kuqala ifayela bese wahlulela ukuthi ngabe ifayili lingabuyiselwa ngokujwayelekile.
IDiskGenius izoklelisa amafayela atholakele ngesikhathi sokuskena bese ibuyekeza imiphumela yokuskena ngesikhathi sangempela. Abasebenzisi bangabuka kuqala amadokhumenti ngesikhathi noma ngemuva kokuskena. Ngokuhlola kuqala ifayili, ungalithola ngokushesha ifayela ofuna ukulibuyisa futhi unqume ukuthi ngabe ifayili lonakele yini. Ngale ndlela, ngaphambi kokululama kwangempela, ungaqonda ngokugcwele izinga lempumelelo lokutakula idatha.
Isinyathelo 5: Khipha amadokhumenti adingekayo. Thikha amafayela ofuna ukuwatakula emiphumeleni yokuskena, bese uchofoza kwesokudla igundane bese ukhetha "Kopisha kufolda ecacisiwe". Ngakho-ke ungakhetha indawo ukuze ugcine idatha etholakele.
Isinyathelo 6: Hlola idatha etholakele.Uma uqinisekile ukuthi idatha itholakele, ungasebenzisa iDiskGenius ukufometha i-U disk. Ngemuva kokufometha, i-U disk ingavulwa ngokujwayelekile futhi igcine idatha.
Njengoba kushiwo ngenhla, uma uhlangabezana nenkinga yokufomatha lapho i-USB flash drive ingavulwa, ungethuki futhi ungayifomathi i-USB flash drive. Ngokuvamile, uma nje kungekho ukwehluleka okungathi sína ngokomzimba kwe-USB flash drive, imininingwane ekwi-USB flash drive ingabuyiselwa ngokwengxenye noma ngokuphelele. Lapho idatha ku-U disk ibuyiselwe ngempumelelo, ungazama ukufometha i-U disk ukulungisa ukwahlukanisa okonakele.
Akukubi ukuthi i-U disk ayikwazi ukuvulwa. Ngizokufundisa izindlela ezintathu zokwenza.
Ngokuvamile, i-USB flash drive ayikwazi ukuvulwa ngokuchofoza kabili, ikakhulukazi ngoba uhlelo lwefayela le-USB flash drive lonakele. Ngakho-ke noma ngabe igciwane lisusiwe, ukuchofoza kabili kusahluleka ukuvula, futhi ibhokisi lengxoxo ngokukhetha ukuvula uhlelo liyakhonjiswa.
Indlela elula yile: chofoza kwesokudla kusithonjana se-USB flash drive -> Izakhiwo -> Amathuluzi -> Qala Ukuhlola -> Hlola ukulungisa ngokuzenzakalela amaphutha wohlelo lwefayela -> Qala, futhi ukulungiswa kuzoqedwa maduzane. Wonke umuntu angazama, ha ha. Kubukeka kusebenza kahle kuma-hard drive.
Ngaphezu kwalokho, uma uchofoza kwesokudla uphawu lwe-USB flash drive, kuzovela inketho yokudlala okuzenzakalelayo, okuvamise ukuba wuphawu lwegciwane.
Uma kunenkinga ngefayela i-Autorun.inf, susa imfanelo bese uyisusa, bese usesha ifayela elikhonjiswe ku-autorun.inf ebhukwini, bese ususa igobolondo lento ngemuva kokulithola, bese ushayela u-D can kuvulwe. Qala-run bese ufaka i- "regedit" (ukubhalisa), sebenzisa i- "Ctrl + F" ukuthola ibhokisi lengxoxo bese ufaka i- "autorun.inf" ukubona i-subkey yegobolondo, bese uqhafaza kwesokudla bese ususa
1. Uma kunamafayela afihliwe anjenge-autorun.inf kusigaba ngasinye, kungcono ukuqala kabusha ikhompyutha ngemuva kokuyisusa.
2. Setha kabusha indlela yokuvula ngohlobo lwefayela (thatha i-XP njengesibonelo)
Vula i-My Computer-Tools-Folder Options-File Type, bese uthola i- "Drayivu" noma i- "Folder" (okuyinto oyikhethayo incike enkingeni obhekene nayo. Uma ungakwazi ukuvula idrayivu ngokuchofoza kabili, khetha u- "Drive "bese ushaya Uma ungavuli ifolda, khetha" Ifolda "). Chofoza u- "Okuthuthukile" ngezansi, ebhokisini lengxoxo elithi "Hlela Uhlobo Lwefayela", "Okusha", gcwalisa okuthi "vula" ekusebenzeni (lokhu kungagcwaliswa ngokuthanda, uma kukhona "okuvulekile" futhi kukhomba okunye okungajwayelekile. exe, kukhona Kungakhomba ihhashi leThrojani, khetha u- "Hlela"), ugcwalise i-explorer.exe kuhlelo lokusebenza olusetshenziselwe ukwenza lo msebenzi, futhi uqinisekise. Bese ubuyela ewindini elithi "Hlela Uhlobo Lwefayela", ukhethe u- "open", ulibeke njengenani elizenzakalelayo, bese uqinisekisa. Manje vula ukwahlukanisa noma ifolda ukuze ubone ukuthi ngabe ibuyele kokujwayelekile?
3. Umthetho weRegistry:
a. Ayikwazi ukuchofoza kabili ukuvula ukwahlukanisa
Start-Run-Enter regedit, thola i- [HKEY_CLASSES_ROOT \_ Drive \_ Shell] bese ususa konke okuqukethwe ngaphansi kweShell, bese uvala irejista, cindezela u-F5 kukhibhodi ukuze uvuselele, bese uchofoza kabili ukwahlukanisa ukuze ubone.
b. Ayikwazi ukuchofoza kabili ukuvula ifolda
Start-Run-Enter regedit, thola i- [HKEY_CLASSES_ROOT \_ Directory \_ Shell] bese ususa konke okuqukethwe ngaphansi kweShell, bese uvala irejista, cindezela u-F5 kukhibhodi ukuze uvuselele, bese uchofoza kabili ukwahlukanisa ukuze ubone
I-disk ye-U izohlala isetshenziswa ezindaweni eziningi, futhi amakhompyutha ahlukile azoba nezingozi ezifihliwe zamagciwane. Akunakugwenywa ukuthi kuzoba nezinkinga eziningi. Sebenzisa lezi zindlela ukuzama.
Elinye lamathuluzi esisebenzisa ukuhambisa amafayela lapho sisebenzisa i-USB flash drive. Muva nje, abangane abaningi bathole ukuthi uma besebenzisa i-USB flash drive, abakwazi ukuyivula ngokuchofoza kabili. Abangani abaningi bacabanga ukuthi i-U disk yabo yephukile. Eqinisweni, sidinga nje kuphela ukuqaphela ukuthola inkinga. Ake sibheke inkinga. Ungayixazulula kanjani inkinga yokuthi i-U disk ayikwazi ukuvulwa.
Idiski ye-U ingenye yamathuluzi asehhovisi esivame ukuwasebenzisa emsebenzini wethu wansuku zonke. Ngenqubo yokusebenzisa i-U disk, sihlangana nezimo ezithile. Isibonelo, lapho ikhompyutha yethu ifaka i-U disk, sithola ukuthi i-U disk ayikwazi ukuvulwa futhi i-U disk ayikwazi ukudlalwa. Yini okufanele ngiyenze? Sicela ungethuki ngalesi sikhathi. Kunezixazululo.Umhleli olandelayo uzokufundisa izinyathelo zokuxazulula inkinga ikhompyutha engakwazi ukuvula idiski ye-USB.
Okufanele ukwenze uma i-USB ingenakuvulwa
Isizathu esiqonde kunazo zonke sokuthi i-U disk ayikwazi ukuvulwa ukuthi uhlelo lwefayela lonakele. Indlela ejwayelekile yalokhu ukulungisa idiski. Qhafaza kwesokudla ku- "Diskable Disk" bese ukhetha "Properties" kumenyu yokuqukethwe okuzivelelayo.
Shintshela kuthebhu ethi "Amathuluzi", chofoza inkinobho ethi "Hlola amaphutha bese uqala ukuhlola", bese uhlola izinto ezimbili ngasikhathi sinye ewindini elivelayo.
Ekugcineni, chofoza inkinobho "Qala" ukuhlola nokulungisa amaphutha wediski.
Lapho le ndlela engenhla yehluleka ukuvula i-U disk, kunconywa ukufometha i-U disk.
Qhafaza kwesokudla ku- "Removable Disk" bese ukhetha "Ifomethi" kumenyu yokuchofoza kwesokudla.
Ewindini le- "Ifomethi" evula, ungahloli "Ifomethi esheshayo" bese uchofoza inkinobho "Qala".
Uma i-USB flash drive isakwazi ukuvulwa ngokujwayelekile, zama ukufaka i-USB flash drive nge-USB port. Ngasikhathi sinye, qiniseka ukuthi izinketho zesethingi ezihlobene nokugcinwa kwamakhompiyutha azikhutshaziwe.
Izindlela ezithile zokubuka nokusetha: Vula ibhokisi lengxoxo le- "Run" bese ufaka umyalo "gpedit.msc" ukufaka i-Group Policy Manager.
Chofoza "Imodyuli Yokuphatha" → "Isistimu" → "Ukufinyelela Kwesitoreji Esisusekayo"
Qiniseka ukuthi "Idiski Elikhiphekayo: Yala Imvume Yokufunda" kanye "Nayo Yonke Idiski Elikhiphekayo: Yala Imvume Yokufunda" ngakwesokunene zombili zibekwe kokuthi "Azilungiselelwe" noma "Zikhutshaziwe". Uma kungenjalo, chofoza kabili into ehambisanayo, hlola into "Yokukhubazeka" ewindini le-pop-up bese uqhafaza ku- "KULUNGILE"
Lapho usebenza neWindows 10, uzohlangabezana nezinkinga ezahlukahlukene, njengekhompyutha engakwazi ukukhanyiswa lapho kufakwa i-USB flash drive kwikhompyutha. Manje uxazulula kanjani inkinga? Isihleli esilandelayo sabelana nawe ngezinyathelo nezindlela ezithile.
Amathuluzi / Izinto zokwakha
Windows 10 uhlelo olusebenzayo
01 Qala isistimu yokusebenza ye-Windows 10, njengoba kukhonjisiwe esithombeni. Chofoza kubhokisi lokusesha lebha yomsebenzi ukuze uqale ukusebenzisa uCortana (Xiao Na) umsizi wezwi ohlakaniphile.
02 Njengoba kukhonjisiwe kumfanekiso, faka i- "File Explorer" ebhokisini lokusesha. ICortana (Xiao Na) ibonisa imiphumela yosesho, chofoza entweni ethi "Ukufaniswa Okuhamba phambili → Ifayela Lokuhlola".
03 Shayela iwindi lohlelo lwe- "Resource Manager", njengoba kukhonjisiwe esithombeni. Nweba isakhiwo somhlahlandlela esimise okwesihlahla ngakwesobunxele bese ukhetha isithonjana se- "My U Disk".
04 Njengoba kukhonjisiwe kumfanekiso, chofoza kwesokudla kusithonjana se- "My U Disk". Imenyu yesinqamuleli se-pop-up, khetha into ethi "Properties".
05 Ibhokisi lengxoxo le- "My U Disk Properties" liyavela, njengoba kukhonjisiwe esithombeni. Khetha ithebhu "Amathuluzi", isinyathelo esilandelayo kuzoba ukufaka ikhompyutha ku-U disk futhi ngeke ivuleke.